musha UNITED UMAMBO BioGRAPHY STORI UK Sports Hunhu Joe Root Yehucheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeChirungu Cricketer ine zita rezita “Rooty". Yedu Joe Root Yehucheche Nyaya uyezve Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevakanaka kwazvo Bato renyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJoe midzi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Joe Root Upenyu Hwepashure uye Mhuri Yemashure:
Kutanga kubva, Joseph Edward Root akaberekwa pazuva re30th raDecember 1990 kuSheffield muSouth Yorkshire, England. Iye aive wedangwe pavana vana akazvarwa kuna amai vake, Helen Root uye kuna baba vake, Matt Root.
Nyika yeBritain yerudzi rwevachena yaive nemidzi midiki inozivikanwa yakarererwa kumusha kwake kuSheffield kumaodzanyemba kweYorkshire kuEngland uko akakurira pamwe chete nemunin'ina wake, Billy Root pamwe nehanzvadzi - Wanda naAmanda.
Kukura mu Sheffield, Mudiki Joe yaive chikamu checricket-mad imba yaive nehupfumi nhoroondo mumutambo. Babamukuru vake, Don aive mumwe wevanofarira vemitambo iyi apo baba vake, Matt aimbova 2nd XI mutambi naNottinghamshire. Saka, maawa mushure mekunge Joe azvarwa kadiki kadhibhodhi akaiswa mumawoko ake madiki kuti amupinze mumutambo wemhuri. Pashure pacho, Joe akakura achinakidzwa nemutambo wekiriketi nababa vake uye nemunun'una waBilly.
Joe Root Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Achitaura nezvedzidzo yaJoe, akatanga nekuenda kuDore Primary School pedyo neSheffield kwaaive kaputeni wechikwata chechikwata chenhabvu uye chekiriketi. Iye zvakare akapa kufarira kutarisirwa kune vadzidzi uye aive akagwinya pakubata.
Kudzidza kwakatevera kwakaona Joe achifambira mberi kuenda kuKing Ecgbert Chikoro muSheffield uko kuita kwake zvakanyanya mumutambo wekiriketi uye kuona maziso kwakamuchengetedza Cricket Scholarship kuWorks College muSparken Hill, England.
Joe Root Pakutanga Yehupenyu Hupenyu:
Joe aive achiri kudzidza kuWorkop College paakaita yake Yorkshire Second Team Dutemba pa18 Chikunguru 2007. Izvo hazvina kutora nguva refu asati apihwa mukana muchikwata chekutanga munguva yekupedzisira kweYorkshire Pro40 mutambo wemwaka kuHeadingley, kurwisa Essex.
Paakapedza kudzidza kubva kuWorkop College mu2008, Joe akatarisa maziso ake pakuva nyanzvi. Nekudaro, akasaina kontrakiti yemakore matatu yeunyanzvi neYorkshire iyo isina kushandisa nguva kuzivisa zvido zvavo zvekuraramisa masevhisi ekiriketi mu2009.
Joe Root Road KuMukurumbira Nyaya:
Mwedzi mushure mekusaina kondirakiti yake yeunyanzvi neYorkshire, Joe akadanwa kuchikwata cheEngland cheUnder 19 Cricket World Cup, kuNew Zealand uko kwaakabatsira divi rake kufambira mberi kuma quarterfinals vasati vabuda muchiitiko ichi neWest Indies.
Asina kushushikana nevechikwata chake pedyo nekubudirira, Joe akazvipira kuita zororo munguva yechando ye2010 uye akatumirwa kuDarren Lehmann Academy kuAdelaide, South Australia uko kwaakakwanisa hunyanzvi hwekugadzirira mutambo wake zvakanaka.
Joe Root Inokwidza Mukurumbira Nhau:
Makore zvaakaenderera, Joe akasimudzira uye airatidza kuti akakosha muna 2012 apo mumiriri wake weEngland mutsigiri weTest Cricket akaona mukana wake wakahwina munhoroondo yeivhu muIndia. Joe akaenderera mberi kugadzira yake makumi maviri neshanu uye akaverengerwazve muchikwata cheODI umo akapedzisa dzakateedzana aine 20 run.
Kukurumidza kusvika parizvino, Joe ndiye Mutungamiriri weEngland Test timu nekugona kwake kuve chikamu chechikwata cheEngland chakahwina 2019 Cricket World Cup. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Joe Root Hukama Hupenyu:
Joe Root akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga nenhoroondo yaJoe yekufambidzana, iye aisazivikanwa kuti akamboita mukadzi chero asati asangana nemusikana wake akatendeuka kuva mukadzi, Carrie Cotterell.
Vaviri vacho vakasangana pabhawa mu - Arc - pakashanda Carrie. Bhawa iri padyo neJ Yorkshire County Cricket Club iyo Joe anotamba nayo. Joe naCarrie vakatanga kufambidzana isati yasvika 2016 uye vakachata munaMarch gore iro. Vakasungira banga racho makore maviri gare gare mushure mekubereka mwanakomana pamwe, Alfred William Root (akaberekwa munaJanuary 2017).
Joe Root Hupenyu hwemhuri:
Joe Root anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaJoe Root:
Matt Root ndiye baba vaJoe. Iye aimbova 2nd XI mutambi ane Nottinghamshire akadzidzisa Joe maitiro ekutamba mutambo uyu paakangoziva kufamba. Chikwereti chaJoe chinoratidza Matt seanonyanya kukoshesa muhupenyu hwake achitaura kuti anogara achimudhonzera nezano rakareruka rekuti arambe akatarisa.
Pamusoro paamai vaJoe Root:
Helen Root ndiamai vaJoe. Iye mukoti wechiitiko chekenza, pamwe nemudhi wekiriketi uyo ave nemakore apfuura, akabatsira mhuri yake kurova chiyero pakati pekuita kiriketi nezvimwe zviitiko zvakakosha zvehupenyu. Pamusoro pezvese, mupiro wake mukuru muhupenyu nekusimuka kwekiriketi iri murunyararo uye rutsigiro rwaamai rwaakamupa kubva paakatanga kusvika.
Nezve mukoma waJoe Root:
Joe Root haana vana vanopfuura vashanu vanun'una ivo vanosanganisira munin'ina wavo Billy pamwe nehanzvadzi shomashoma dzinozivikanwa Wanda naAmanda. Billy anogoverana yakafanana nhoroondo yehupenyu naJoe uye anotamba nyanzvi yekiriketi yeGlamorgan. Mukoma anotaridzika akafanana nehama yepedyo naJoe uye inomuona seanokurudzirwa zvikuru kusimudza cricketer.
Pamusoro pehama dzaJoe Root:
Kure kubva kuvana vababa vaJoe, ana sekuru vake vanababa vakachererwa naDon apo sekuru vake amai vake - John, vakashaya aine makore gumi nemana 8. Vanababamunini vake naamainini vake vanozivikanwa saDudley naIvana apo makanga musina marekodhi bababamunini vake pamwe nanasekuru nasekuru vababa vake. Saizvozvo, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaJoe uye muzukuru panguva yekunyora.
Joe Root Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Joe Root arere .. Gara kumashure apo isu tinokuunzira magariro ehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti utore mufananidzo wake. Kutanga, Joe's persona isanganiswa yeCapricorn Zodiac maitiro.
Akadzikama, akataridzika, anobuda uye zvine mwero anozivisa ruzivo zvine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvaanofarira kuita uye zvaari kufarira zvinosanganisira kuridza gitare, kugadzira mapuranga, kuchengetedza mitambo yebhola uye kupedza nguva yakanaka neshamwari neshamwari.
Joe Root Mararamiro:
Joe Root ane inofungidzirwa mambure anodarika emadhora 3 mamirioni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaJoe kunonyanya kubva pamubhadharo waanowana sekiriketi nepo kuongororwa kwemafambisiro ainoita mari kunoratidza kuti anogara mararamiro ekuchengetedza.
Semhedzisiro, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezve imba yake kuDore muSheffield, South Yorkshire panguva yekunyora. Zvimwechetezvo, cricketer inozivikanwa kuve neRange Rover iyo yaanotyaira kudzidziswa uye nemitambo.
Joe Root Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Joe Root yehucheche nyaya uye biography pano ndidzo dzisingataurwe kana zvishoma-dzinozivikanwa dzisina kunyatsoiswa mune yake bio.
Kunyangwe akadzikama nechitarisiko chesaini, Joe is a trankster inonzwisisika ose ari uye kubva pamunda wekutamba.
Joe Root haana marata, uye haaputi. Nekudaro, akaonekwa asina kunwa doro zvine mwero.
Joe Root anotsigira mushandirapamwe wekunwa zvine mutoro. Image Chikwereti: Twitter.
Nezve chitendero chake, Joe akazvarwa uye akarerwa somuKristu. Nekudaro, achiri kuzotaura pamusoro pezvinhu zvinogona kupa chiratidzo chezvaaitenda.
Aive akaremerwa seMangwana England Kapteni (FEC) panguva yake yekukoreji uye akazopedzisira ave kaputeni wechikwata chenyika cheEngland.
Thanks for reading vedu Joe Root Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!